Rohtos Suoja Kiniinada ka hortagga ka hortagga on sale online, maraakiibta adduunka | Metropolitan.fi
Rohtos Suoja Kiniinada ka hortagga ka hortagga on sale online, maraakiibta adduunka
Rohtos Labs waa shirkad udiyaarineysa iyo soo saarida cunto dheellitiran. Mid ka mid ah alaabooyinka ay shirkadu sheeganayso in ay qabatay ayaa la imaaneysa daaweynta ciribtirka.
Markii hore waxaa Finland laga helaa kiniiniyada Rohtos Suoja oo hadda laga heli karo dukaanka internetka ee shirkadda.
Iyadoo ku saleysan magaalada waqooyiga ee Oulu, Finland - Rohtos Labs waxay soo saartaa alaabadooda ku saabsan fahamka ugu dambeeyay ee daaweynta biochemistry iyo molecular. Shirkad gaar loo leeyahay ayaa sidoo kale wada shaqeyn dhow la leh jaamacadda Oulu.
Rohtos Labs designs alaabta laga sameeyey maaddooyinka dabiiciga ah. Isku darka sayniska casriga ah iyo cilmi-baarista casriga ah ee Aasiyada Aasiya (TCT), shirkaddu waxay u sameysey alaabooyin dhowr xaaladood. Dhammaantood waxay wadaagaan fikradda ah isu dheellitirka kiimikada jirka iyada oo loo marayo nafaqooyin gaar ah.
Qodobka ugu muhiimsan ee cirfiidka waa asetaldehyde
Bishii Juun 2017 shirkadda ayaa ku dhawaaqday in ay tahay badeecada isticmaalaha khamriga. Waxyaabaha waxaa lagu dhisaa xaqiiqda ah in dheef-shiid kiimikaadka uu soo saaro kiimiko oo loo yaqaan 'acetaldehyde'. Tani waa sun ku jirta canshuurta jirka ee ka badan kan ethanol (khamriga cabbitaanka) waana sababta ugu muhiimsan ee khamri cabista ka dib.
Beerka wuxuu soo saaraa glutathione si loo yareeyo acetaldehyde, laakiin beerka dabiiciga ah wuxuu ku baxaa laba qaybood oo khamri ah. Tani waxay keenaysaa jidhka oo buuxa acetaldehyde. Kiniinnada dheeraadka ah ee Rohtos Suoja waxay ujeedadoodu tahay inay soo celiyaan dheelitirka. Alaabta waa in la wada cunaa ka hor intaadan cabbin aalkolo oo ma ahan daaweyn lagaga hortagayo.
Tani waxaa lagu sameeyaa iyada oo loo marayo maaddooyinka isku dhafan si kor loogu qaado wax soo saarka dabiiciga ah ee glutathione. Antioxidants iyo fitamiinada ayaa lagu daraa si loo soo celiyo isku dheelitirnaanta kiimikooyinka kale ee dhacaya marka la isticmaalo khamriga xad dhaafka ah.
Rohtos Suoja ayaa hadda ku socota baadhitaano indho-indhogal ah oo indhoole ah si loo qiyaaso waxtarka sheyga. Isticmaalayaasha cuntada dheeraadka ah waxay soo sheegeen hoos u dhigista saameynta qulqulka inta u dhexeysa 70-75% ka dib isticmaalka khamriga culus.
Diyaargarow 7 maalmood oo isdaba-joog ah oo lagu cabo khadka Tuscan Festival ee 2017 isticmaalka Rohtos Suoja waxay keentay hoos u dhac ku yimid calaamadaha niyadjabka ka dambeeya. Cunista pizza iyo cunto kale oo degdeg ah subaxdii kadib ayaa sidoo kale la dhimay. Sidaas awgeed culeyska iyo hagaajinta isku kalsoonaanta ayaa laga yaabaa inuu saameyn xun ku yeesho dadka isticmaala muddada dheer.
Qaadashada biyaha ee ku filan waa mid muhiim u ah in la yareeyo daal jirka oo sababa khamriga. Esanolku jidhka wuu ka nadiifiyaa. Biyo cabidda inta u dhaxaysa cabitaannada iyo ka hor inta aanad hurdo kugu noqonin ayaa lagugula talinayaa inaad yareyso saameynta saamaynta.
Iibso Rohtos Suoja online, shixnadda caalamiga ah
Rohtos Suoja waxaa lagu qeexay sida cunto dheellitiran oo "Ka difaacaya maskaxda iyo jirka markaad khamri cabto oo yareeyso xayawaanka maalinta xigta."
Badeecada waxaa markii hore laga helaa Finland, laakiin tan iyo Janaayo 2018, Rohtos Suoja iyo alaabooyin kale ayaa hadda loo heli karaa iibsashada internetka ee caalamka oo dhan si Afrika, Asia, Australia, Europe, North America, South America.
Sheyga wuxuu ku yimaadaa qaybo ka mid ah 30 kiniini, ku filan 10-15 wakhtiyo cabitaan ah iyadoo ku xiran qiyaasta. Qiimaha unit ee € 23.90 (qiyaastii $ 30) oo lagu daray maraakiibta. Lacag bixinta waxaa lagu sameyn karaa Visa, MasterCard iyo kaararka creditka American Express ama via Paypal.
Rohtos Labs wuxuu bixiyaa alaabteeda damaanad-lacageed lacageed - dadka aan ku qanacsanayn waxay dib u celin karaan kabaha aan la isticmaalin si buuxda u celin. Amarada waxaa lagu sameyn karaa dukaanka rasmiga ee shirkadda rasmiga ah ee rohtoslabs.com
Rohtos Suoja waa shey dabiici ah oo la soo saaray oo laga soo saaro Finland, oo ah waddanka waqooyiga Yurub. Sharraxaadda badeecadu waxay taxdaa waxyaabaha soo socda ee dabiiciga ah ee loo isticmaalo badeecada (qiyaasta 3 capsules):
N-acetyl sisteine: 330 mg
Vitamin C (ascorbic acid): 330 mg
Soo saarida caanaha: 165 mg
Zinc (sulphate monohydrate): 110 mg
Vitamin B9 (folic acid): 1 mg
Vitamin B12 (methylcobalamine): 0.05 mg
« Rohtos Suoja tablete za preprečevanje mačka na spletu, odpremo po celem svetu - Rohtos Suoja павилаҳои пешгирии пешгирии фурӯш дар интернет, интиқол дар саросари ҷаҳон »